Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. राजनीति त्यागेर ड्रागन खेतीमा रमाउँदै पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट – Emountain TV
राजनीति त्यागेर ड्रागन खेतीमा रमाउँदै पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट
दाङ, २ माघ । पछिल्लो समय ड्रागन फलको लोकप्रियता बढ्दो छ । यसबाट स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरुको जानकारी पाउन थालेपछि यो फल उत्पादन गर्ने र खानेहरुको संख्या बढेको हो ।
नेपालीहरु कमैले सुनेका ड्रागन फलको खेतीमा लागेर पूर्व पर्यटन तथा स्वास्थ्य मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ । राजनीतिलाई चटक्कै त्यागेर ड्रागन फल खेतीमा लाग्नु भएका बिष्टको दैनिकी कस्तो छ त ?
राजनीतिलाई त्यागेर व्यवसायीक कृषि पेशामा लाग्नु भएका पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले दाङको बिजौरीमा ‘रातकी रानी’ भनेर चिनिने ‘ड्रागन फल’ खेतीमा हुनुहुन्छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ को बिजौरीमा पूर्व पर्यटन तथा स्वास्थ्यमन्त्री मगरले ६६ कठ्ठा जमिन १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर ड्रागन फल खेती गर्नु भएको हो ।
रोपेको डेढदेखि दुई वर्षसम्ममा फल्ने विष्टले ६ महिनामै फलाउनु भएको छ । छिप्पिएको बिरूवा रोपेको हुनाले ६ महिनामै फलेको उहाँले बताउनुभयो । मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधीय गुणयुक्त ‘ड्रागन फल’ प्रतिबोट ३ देखि ५ किलो फल्दा करिब ५० क्वीन्टल फल्ने बिष्ट मगरले बताउनुभयो ।
उष्ण प्रदेशीय हावापानी भएको तराई र मध्यतराईमा हुने ड्रागन फलको बजार मूल्य प्रतिकिलो ७ सयदेखि १९ सय रूपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । दिगो आम्दानी हुने नगदे बाली मानिएको यो फलले मलखाद, काँटछाँट र सिँचाई पुगेको अवस्थामा रोपेको २० वर्षभन्दा बढीसम्म फल दिने गर्दछ । केही महिनादेखि रमाएका पूर्वमन्त्री मगर कृषिलाई पर्यटन र उद्योगसँग जोड्नु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
लोकेन्द्र बिष्ट माओवादी भूमिगत हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बन्दुक बोकेरै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । २०६४ सालको निर्वाचनपछिको बनेको सरकारमा उहाँ पर्यटन मन्त्री बन्नु भयो ।
संसद भवनमा पेस्तोल बोकेरै प्रवेश गर्न खोज्दा पक्राउ पर्नु भएका विष्ट गणतन्त्रपछि बनेको पहिलो प्रचण्ड सरकारको पालामा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा पनि चिनिनुहुन्थ्यो ।
राजनीतिमा लाग्दा पाएको भूमिगत बेलाको कठिन दुःख र खुला राजनीतिमा आएपछि मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै सानले हिंड्नु भएको विष्ट अहिले पूरै राजनीति छोडेर कृषिमा तल्लिन हुनुहुन्छ ।
युवा विदेशिएर बाँझो बनेका जमिनमा ड्रागन फल फलाएर नमूना किसानको रुपमा लोकेन्द्र बिष्ट चिनिनु भएको छ । बिष्टको कर्म सर्वसाधारणका लागि मात्र होइन नेताहरुकै लागि पनि गतिलो र अनुकरणीय शिक्षा बनेको छ ।
नौं वटै जिल्लाबाट एक साथ भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्ने डिजिटल प्रविधिको सुरुवात
चीनबाट १८५ नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने
कोरोना भाइरसको त्रास : बिदेशी पर्यटकले धमाधम होटल बुकिङ रद्द गर्दै
एमसीसी परियोजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिर बदल्छ : प्रधानमन्त्री ओली
डडेल्धुरामा अजयमेरुमा निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरु
डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घट्यो
विद्युतका तार भूमिगत बनाउने काम सुरु
६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको बहस हुनु सकारात्मक : अर्थमन्त्री
पाल्पाका कृषक व्यवसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित
सम्पत्ति शुद्धिकरणका हिसाबले सहकारी संस्थाहरु जोखिममा : महानिर्देशक भट्टराई
दुई वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी : अर्थमन्त्री
६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै
कोरोना भाइरसको असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा
विराटनगरमा विराट एक्स्पो शुरु
‘धितोपत्रको नीतिका कारण कसैले कमाउने र कसैले गुमाउने अवस्था आउँदैन’
यशोधरामा पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति गठन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब अनुदान